Nwanyị eze na-agba ụbọchị ncheta afọ 100 nke Philip site na ịkụ osisi ọhụrụ aha di ya nwụrụ anwụ
Mgbe onye na-ede blọgụ gosipụtara na Coco Emilia bụ nke adịgboroja ...
Hilaria Baldwin leghaara ihe nketa nke Spanish na Podcast -…
Ọtụtụ nde mmadụ azụrụ ngwa ahịa a ma ama, mana ...
Ihe osise nke Queen: Coleen Nolan na-atụle ezinụlọ eze
Debanye aha maka IWU ugbu a, echefula akụkọ ndị eze kacha mma.
Ozi na-ezighi ezi
Mgbe ị debanyere aha, anyị ga-eji ozi ị nyere zitere gị akwụkwọ akụkọ ndị a. Mgbe ụfọdụ ha ga-etinye aro maka akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ metụtara anyị na-enye. Nke anyi Nzuzo Nzuzo na-akọwatakwu banyere otu anyị si eji data gị na ikike gị. Nwere ike wepu aha gị n'oge ọ bụla.
Ọ kọwara Duke nke Edinburgh Rose, nke Royal Horticultural Society (RHS) nyere dị ka onyinye "mara mma" ma gosipụta ekele maka mmegharị "ezigbo obiọma" ahụ. Prince Philip nwụrụ mgbe ọ gbara afọ 99 na Eprel 9 na Windsor Castle.
Ọ nwụrụ naanị izu itoolu tupu ihe gaara abụ 100 afọ.
Nwanyị Queen natara Duke nke Edinburgh si na Keith Weed, Onye isi ala nke RHS.
O kwuru, sị: “Nke a bụ rose aha Duke nke Edinburgh rose iji gosi akara afọ otu narị ya ma bụrụkwa ncheta maka ihe niile magburu onwe ya ọ mere n’oge ndụ ya na onye ọ bụla na-echeta ihe niile o mere.
“Maka rose ọ bụla enwere onyinye na-aga na Living Legacy Fund nke ga-enyere ọtụtụ ụmụaka aka.
Nwanyị Queen na-anata Duke nke Edinburgh Rose (Image: GETTY)
"Ọ bụ mara mma ifuru n'onwe ya, a okpukpu abụọ ifuru" (Image: GETTY)
“Ọ bụ ifuru mara mma n’onwe ya, okooko osisi abụọ. "
A kụrụ ohia ohuru ohuru na East Terrace Garden nke Windsor Castle.
Philip, onye lụrụ eze nwanyị n'ọdịnihu na 1947, bụ nwunye eze kacha dịrị ogologo na akụkọ ntolite Britain.
A na - akpọ Duke nke Edinburgh Rose mgbe ọ nwụsịrị site na Harkness Roses.
GỤKWUO GBASARA YA: Doria Ragland mere ka Oprah Winfrey gbawaa mgbe o kwusịrị na 'e nyere ya ego maka ajụjụ ọnụ'
A kụrụ osisi ohia ahụ na East Terrace Garden nke Windsor Castle (Image: GETTY)
Ha dị ịzụta online maka .14,99 18,74 na ite ma ọ bụ .XNUMX XNUMX na ite na onyinye-ọbọp.
Site na ire ọ bụla, a na-enye Duke nke Edinburgh Living Legacy Fund nke 2,50 XNUMX nyere iji kwado ndị na-eto eto.
Nwanyị Queen ahụ yi akwa ifuru na-acha anụnụ anụnụ, cardigan ọcha na ugogbe anya maka anwụ mgbe ọ na-anata ohia rose.
Mgbe ọ na-agwa Maazị Weed okwu, ọ rịbara ama na ogige okooko osisi ya amaala oge karịa oge ọ bụla n'ihi ihu igwe.
Prince Harry chere ihu 'eze na-ewe iwe' na Queen ka ọdịnihu na-alụ [Ujo]
Asụsụ nke Princess Anne na Princess Margaret na-egosi 'ọdịiche' [Ekpughe]
Harry na Meghan 'kụrụ aka' dị ka di na nwunye nke Kevin Clifton gbachitere [Insight]
Harkness Roses zụrụ Duke nke Edinburgh Rose (Image: GETTY)
Olili ozu Prince Philip mere na Windsor Castle (Image: GETTY)
O kwuru, sị, “Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ihe tooro eto ebe a. "
Maazị Weed zara, "Agam agwa gị ihe, Roses gị dị n'ihu m ntakịrị.
“Ma ha ga-n'ezie n'ezie ugbu a. "
Nwanyị eze ahụ ekwenyeghi, na-ekwu, “mba, mba, mba, ọ bụ izu Ascot. "
N'ihi iwu Covid, naanị mmadụ 30 na-eru uju gara olili ozu Prince Philip (Foto: EXPRESS)
O kwukwara, sị: “Anyị nwere ọnwa oyi nke Mee, ọ́ bụghị ya? "
Onye isi oche RHS zara, “Ọ bụrụ na anyị nwere ike ikwu ihe ọma banyere afọ a dị ịtụnanya, anyị enweela ọganihu na ịkọ ugbo. "
Emere ncheta Prince Philip na St George's Chapel na Windsor Castle.
Nwanyị Queen sere na olili ozu Prince Philip (Image: GETTY)
N'ihi iwu coronavirus, naanị ndị na-eru uju 30 ka enyere ka ha gaa ma chọọ ka ha kpuchie ihu mgbe ha na-arụ ọrụ.
Foto na-agbawa obi nke Queen na-anọdụ naanị ya agafeela na ịntanetị, ebe achọrọ ndị ọbịa ka ha wepụta onwe ha.
Prince Harry laghachiri na California maka ncheta ahụ.
Edemede a pụtara izizi (na Bekee) na https://www.express.co.uk/news/royal/1447835/Queen-news-prince-philip-100-birthday-husband-duke-of-edinburgh-royal -family -a kachasị
100eụbọchị ọmụmụamanwụrụ anwụMarinomNewPhilip
Belgium: Coucke na-etinye ego ka Durbuy dịrị ụbọchị 365 n'afọ
Robert Pirès: ọnụ ahịa a na onye ọkpụkpọ bọọlụ kwesịrị ịnọ na foto nke Euro bọọlụ 2000
Mgbe otu onye na-ede blọgụ gosipụtara na Coco Emilia na-enwe afọ na-ezighi ezi, madam ...
Hilaria Baldwin leghaara mkparị nketa Spanish na pọdkastị - ndị mmadụ
Ọtụtụ nde mmadụ azụrụ ngwaahịa a ma ama, mana ọ nwere ike ...
Léa Drucker: nrụgide ọ tinyere onwe ya mgbe ọ mụsịrị nwa